Most Watched | Makalukhabar.com
सियोन स्कुलमा सुरक्षित छैनन् छात्राहरु, एसइइको तयारीमा रहेकी छात्रामाथि शिक्षकबाटै यौन दुर्ब्यहार !
फागुन २३, धरान । सियोन स्कुलका एक शिक्षक (होस्टल वार्डेन) ले एसइइ परीक्षाको तयारी गरिरहेकी एक छात्रालाई यौन दुर्ब्यहार गरेको खुलेको छ । केहि महिनाअघि मात्र घटेको घटना ढाकछोप गर्न उनले ती छात्रालाई विभिन्न प्रलोभन समेत दिएका छन् । शिक्षकले होस्टल भित्रै ती छात्रालाई यौन हिंसा गरेपछि उनी होस्टल...जारी राख्नुहोस...
चैत्र १५, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोविड १९) नियन्त्रणको नाममा ठूलो मात्रामा अत्यावश्यक वस्तुहरु विना प्रतिष्पर्धा खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएको ३ महिनासम्म सरकारले आवश्यक किट्स, मास्क, पीपीई, ग्लोब लगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद नगरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अ...जारी राख्नुहोस...
‘शिक्षामन्त्रीले पेलेर जान्छु भनेर सोचे कुर्सीबाट निकालेर फालिदिन्छौं’ डा. सुनिल शर्मा
काठमाडौं ९ असोज । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाई नै मेडिकल कलेज चलाउन चूनौती दिएका छन् । निजी मेडिकल कलेज एशोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द...जारी राख्नुहोस...
साँढे आठै बजे खाना खाएर सार्वजनिक बस चढेर कार्यालय आउनु पर्ने केहि दिन देखिको मेरो बाध्यता थियो । आफुसँग भएको सवारी बेचेर अर्को लिने चक्करमा मैले असोज अन्तिम सातादेखि सार्वजनिक यातायात, बस ट्याक्सी, टेम्पो त कुनै बेला टुटल र पठाओका सेवा प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । १० वर्ष भएको थियो मोटरसाइकल चला...जारी राख्नुहोस...
वीपी प्रतिष्ठानका यी भाइरसलाई कसले गर्ने कारवाही ?
फागुन २२, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई सिनेटले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेर कानुनी शासनको उदाहरण पेश गरेको छ । गत साता प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले प्रतिष्ठानमा बढ्दो भ्रष्टाचारको जड उपकुलपति भएको ठहर गर्दै उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेर...जारी राख्नुहोस...
चुनाबकाे संघारमा कांग्रेस धरानमा तरंगः कांग्रेसका क्षेत्रिय सदस्य सहित नेकपामा प्रवेश
कात्तिक २, धरान । नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य तथा १ नं. प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्यले धरानलाई पर्यटकीय गन्तव्य, शिक्षा, स्वास्थ्यको हव बनाउन र धरानको विकासमा सक्षम नेतृत्वको लागि मंसिर १४ को उपनिर्वाचनमा नेकपाको दरिलो उपस्थिति अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।चाडपर्वको अवसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट...जारी राख्नुहोस...
माघ २१, काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी शिखर सुज विन्टर सेल मेला पर्सी अर्थात २३ गते सकिँदैछ । पुस २० गतेबाट सुरु भएको शिखर सुज विन्टर सेल मेलामा लाखौं उपभोक्ताले आफुलाई मनपर्ने जुत्ता चप्पल भारी छुटमा खरिद गरिरहेका छन् । मेला सकिन २ दिन बाँकी रहँदा उपभोक्ताको भिड थामिनसक्नु भएको छ । जोरपाटी नयाँबस्...जारी राख्नुहोस...
मंसिर २३, झापा । नेपाल आइडल सिजन २ यतिबेला ग्राण्ड फेनालेको संघार तिर छ । शुक्रबारको एपिसोडबाट नवलपरासीका अमित बराल बाहिरिए पछि चार प्रतिष्पिर्धी विच उपाधीका लागि होड चलिरहेको छ । यसमा झापाका दुई प्रतिष्पर्धीको प्रतिष्पर्धा भने बडो रोचक देखिएको छ । झापाका सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी एउटै जिल्लाका...जारी राख्नुहोस...
सङ्लो तादीको धमिलो कथाः प्रहरी नै किन लुकाउँदैछ हत्यारा ?
हत्या गरिएका गणेशका बाबुआमा अहिले घर अगाडिबाट स्कुल गइरहेका विद्यार्थीहरुलाई देख्दा भक्कानिन्छन् । स्कुल पढ्न हिँडेका अरु किशोरहरुका अनुहारमा गणेशलाई नै देख्छन् । उनी परिवार र आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनन् । अरुका छोरीहरु देख्दा रुन मन लाग्छ र झल्झली सम्झिन्छन् । घरमुनि बग्ने तादी र त्रिशुली नदीको पानी ज...जारी राख्नुहोस...
माघ ११, काठमाडौं । पब्लिक स्पीकर नेपाल २ को उपाधि धरानका रमेश प्रसाईले हात पारेका छन् । फाइनल चरणमा ५ जना प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै रमेशले उपाधि हात पारेका हुन् । देशका १२ स्थानमा भएको अडिसनमा सहभागी ११ सय प्रतिष्पर्धीबाट रमेशले उपाधि माथि कब्जा जमाए । उनले प्रमुख उपाधिको साथै पब्लिक स्पीकर नेपाल...जारी राख्नुहोस...